ဘွာတေး..ဘွာတေး..အလကား..စတာ… | Layma's World
Posted on January 26, 2008 by layma
ဒါလေးများ… ပြောင်းဆိုလဲ ပြောင်းပေးလိုက်ရုံပေါ့ဆိုပြီး cpanel.byethost13.com ကို ၀င်လိုက်တယ်…။ အဲဒီမှာ ပြသနာ စတာပဲ..။ ၀င်လို့မရဘူး…။ password & user name မှားနေတယ်တဲ့…။ လေးမက မေ့တတ်လွန်းလို့ password ကို စာအုပ်ထဲရေးမှတ်ထားတာ….ကြည့်ရိုက်တာ ဘာမှ မှားစရာမရှိဘူး…။ ၆ ခါ လောက်ကြိုးစားပြီး မရတော့ lost password ဆိုပြီး အသစ်တောင်းလိုက်တယ်….။ password အသစ်နဲ့ ၀င်တယ်… ရတယ်…ဒါပေမယ့် file manager ကို ၀င်တော့ မရဘူး… ဒီ user ကို denied တဲ့…အောင်မယ်…ဒင်းကများ..လေးမကို..ရာရာစစ….ဘာမှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့… byethost ကို အကြည်အညို ပျက်စေတဲ့ ကိစ္စမျိုးလည်း မရေးမိပါဘူး…. ဂလို လုပ်စရာလားဆိုပြီး ဒေါကန်သွားတယ်….။ နောက် ပြန်ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်တော့ မရတော့ဘူး… အဲဒီလိုနဲ့ … ဘလော့တွေ မလည်နိုင်ဘဲ..သူ နဲ့ တင် ချာချာလည်ပြီး ..အသစ်နဲ့ ၀င်လိုက်..အဟောင်းနဲ့ ကြိုးစားလိုက်..ဘာနဲ့မှ မရဘူး…။ File manager မှာ ပြင်ရမှာ သူ့ ဝင်လို့မရတော့ ဘာလုပ်ရမှာတုန်း…။
ဒီစာလေးနဲ့ အတူ ခွေးအကောင် ၆၀ ..အိမ်ပေါက်ဝ ရောက်လာလို့ပါ…။ ဟား..ဟား.. တကယ် ရီချင်သွားတယ်…။ အိမ်က ၃ ကောင်တောင် ..လေးမ …အငတ်ခံပြီး ကောင်းကောင်းကျွေးနေရတာ… အကောင် ၆၀ များဆို ဘယ်လိုများနေမလဲလို့ စဉ်းစားပြီး တစ်ကောင်ချင်း သေချာ လိုက်ကြည့်တော့.. .ရုပ်တွေက တကယ် ရီစရာကောင်းတယ်…။ စိတ်တွေ ပေါ့သွားပြီး မေးလ် ကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်တယ်…။
subject_ I don’t know what to do. I can’t log in cpanel.byethost13.com
ဒီနေ့ တနေ့ လုံး မအားမလပ် ဖြစ်နေရာက..အားလပ်လို့ ..blog ကို ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အော်သံလေးတွေ တွေ့ ရတယ်…။ ဘလော့ဂ် ပိတ်ထားတဲ့ ညိမ်းညို ကြီးက အားပေးစကားပြောသွားသလို… ကို မှော်ဆရာ.နဲ့ ကို အတာ ကလည်း လေးမ ဘလော့ဂ် အိုကေနေတာပဲတဲ့…။ မောင်မျိုးနဲ့ မနုစံ က ကွန်မန့် တွေ ပြန်ရေးပေးမတဲ့…. ခင်စရာကောင်းလိုက်ပုံများ….။ တစ်ခါမှ ကွန်မန့်မရေးတဲ့ ညီမလေး စိုးမိုး ကလည်း bye bye မလုပ်နဲ့နော်..တဲ့…။ ခေးရော့စ်လေး ကလည်း..မျှော်လင့်တကြီးချောင့်နေတယ်နော်..တဲ့…။ ဆီပုံးမှာလည်း..မခွန်မြလှိုင်..လွမ်းစေ..မွန်..ဂျေ..တို့က အားပေးသွားသေးတယ်…။
« Bye..Bye…byethost.com ပိုးစုန်းကြူး အော်သံ »
koatar, on January 26, 2008 at 7:50 pm said:
အမလေးဗျာ တော်သေးတာပေါ့ အကောင် 60 ကယ်ပေလို့ ဟားဟား။ လေးမရေ ငါ့မှာတော့ support ကိုအကူညီလဲ မတောင်းတတ် လုပ်လို့လဲမရနဲ့ နောက်ဆုံး wordpress ကို အသစ်ပြန် လုပ်လိုက်ရတယ်။ backup တွေ ရှိလို့ တော်သေးတာပေါ့။ 🙂
soemoethu, on January 27, 2008 at 8:50 am said:
ဟေး…ပျော်တယ်ဟေး..မမ..မ bye ..တော့လို့့ရဲလေးတူတဲ့ကိုမျိုးလိုတော့အမျိုးမျိုးဘဲနော်..လို့ စိုးမိုးကမပြောဘူးနော်..ဟီး… 😛
မောင်မျိုး, on January 27, 2008 at 1:27 pm said:
မျှားပြာ, on January 27, 2008 at 5:04 pm said:
အဖြစ်က မနှစ်ကနဲ့ မတူတော့ဘူးနော် …ကောင်းသွားပီ
ကောင်းသွားပီ … မိုက်တယ်ကွာ … အကုန်ဂွတ်
tu tu, on January 27, 2008 at 11:24 pm said:
nu-san, on January 28, 2008 at 4:41 pm said:
အမလေး.. တော်သေးတာပေါ့.. စတာတဲ့.. ဟွန်း… နောက်တစ်ခါ ဒီလို စရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်.. 😀 😀
အခုလို လေးမ အဆင်ပြေပြီး ပျော်သွားပြီဆိုတော့လည်း အမတို့လည်း ပျော်တယ်။ 🙂
layma, on February 3, 2008 at 2:50 pm said:
>ကိုအတာ…လေးမက ကိုယ့်ဟာကိုယ်မလုပ်တတ်တော့ သူပဲ ပြန်လုပ်ခိုင်းရတာပေါ့..။
>စိုးမိုးရေ..ညီမက လိမ်မာတယ်..။ အဲဒီကောင်လေးကို အတုမခိုးနဲ့…။
>မောင်မျိုး… ဘိုင်းတော့ဘူး..။ အိုကေသွားပြီ..။
>မတူးတူး..လေးမက ဂျမ်းပုံ ဖြစ်သွားပါလား။။ ဘိုနာမည်လေး လုပ်ပါ…။
>မနုစံ..အစ်မက ကွန် မန့်တွေ ပြန်ရေးပေးမယ်ဆိုလို့…။ လေးမပျော်သလို အစ်မတို့ပျော်တယ်ဆို..လေးမကလည်းပျော်…အစ်မတို့လည်းပျော်…လေးမလည်းပျော်…ဟဲ..ဟဲ။